Wasaarada Caafimaadka ee Xukuumada Soomaaliya oo Shaacisay in Tirada Dadka qaba Cudurka Coroavirus ay gaartay 60 Qof – Beegsonews-Wararka maanta
Home Wararka puntland Wasaarada Caafimaadka ee Xukuumada Soomaaliya oo Shaacisay in Tirada Dadka qaba...
Wasaarada Caafimaadka ee Xukuumada Soomaaliya oo Shaacisay in Tirada Dadka qaba Cudurka Coroavirus ay gaartay 60 Qof
War deg deg ah Wasaarada Caafimaadka ee Xukuumada Soomaaliya oo Shaacisay in Tirada Dadka qaba Cudurka Coroavirus ay gaartay 60 Qof.
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in la diiwaan geliyay 35 xaaladood oo COVID-19 ah 24kii saac ee ugu dambeysay. Xaaladaha cusub 32 kamid ah waxay ku suganyihiin magaalada Muqdisho, labo waxaa laga diiwaan geliyay Hageysa, Booramana waxaa laga helay qofkii ugu horreeyay.
Previous articleGuddida Ka Hortagga Covid-19 ee Somaliland oo Qodobo Cusub soo saaray.
Next articleXidhitaankii Waxbarashada oo wakhti kale lagu COVID-19 ee JSL.
Guddoomiyaha gobolka sool oo soo dhaweeyey askar kasoo goosatey puntland